World Archives - Page 36 of 37 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 21, 2016 Puntland Mirror 0
Aqalka sare ee baarlamaanka dalka Maraykanka ayaa diiday qorsheyaal lagu sii xoojin lahaa xakamaynta hubka. Qorshayaashaas waxaa kamid in la hor istaago in hub laga iibiyo dadka kujira liiska qolyaha argagixisada looga shakisan yahay. Afar […]
June 20, 2016 Puntland Mirror 0
Tirada dadka ku barakacay colaada ayaa gaartay meeshii ugu saraysay oo la diiwaangasho, sida ay sheegtay haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Waxaa lagu qiyaasay 65.3 milyan oo qof in ay midkood yihiin, qaxooti, nabadgalyo […]
June 18, 2016 Abdi Omar Bile 0
Maxkamad Masaari ah ayaa xukun daa’in ku riday markale Madaxweynihii hore ee Dalka Masar, Maxamed Mursi maanta oo Sabti ah. Maxkamada ayaa ku heshay Mursi eedaymo ah inuu dalka Qatar siiyay macluumaad sir ah, laakiin […]
Dowldda Eritteeriya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dileen in ka badan 200 oo askar Itoobiyaan ah, islamarkaana ay dhaawaceen in ka abdan 300 oo kale, intii uu socday dagaaal xuduudda ka dhacay maalmihii Axadda iyo Isniinta. […]
June 16, 2016 Puntland Mirror 0
Kooxda argagixisada ah ee Booko Xaaraam oo ka dagaalanta dalka Nayjeeriya ayaa samaysatay idaacad FM ah oo mawjadeedu tahay 96.8, sida ay sheegtay laanta Xawsaha ee idaacada VOA. Sida ay wararku sheegayaan, dadka ku nool […]
Xaaska ninkii qoriga watay kaasoo 49 qof ku dilay baar ay leeyihiin raga isku-tagga oo ku yaala magaalada Orlando ee Maraykanka ayaa la maxkamadaynayaa iyadoo lala xiriirinayo weerarkaas, sida ay sheegayaan warbixinada. Xeer ilaaliyaasha ayaa […]
Paris-(Puntland Mirror) Taliye booliis oo Faransiis ah iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay weerar mindi markii nin mindi ku hubaysan uu soo weeraray guriga ninka booliiska ah deegaanka Magnanville oo 33 km ka xigta magaalada Baariis […]
June 13, 2016 Puntland Mirror 0
Dowlada Eriteeriya ayaa ku eedaysay Itoobiya in ay weerar ku qaaday xadkeeda, laakiin inta uu la egyahay weerarka ilaa iyo hadda ma cadda mana jirto jawaab dhaqso ah oo ka timi Itoobiya. Eriteeriya oo xornimadeeda […]
June 12, 2016 Puntland Mirror 0
Konton qof ayaa la ogyahay ilaa iyo hadda in ay ku dhinteen toogasho Sabtidii ka dhacday baar ragga isu-tagga oo ku yaala magaalada Orlando, ee gobolka Florida, Maraykanka sidoo kalena waxaa lagu dhawaaqay xaalad deg […]
Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida, Maraykanka, gelinkii hore ee maanta oo Axada, waxaana lagu dilay dad gaaraya 20 qof waxaana ku dhaawacmay 42 […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa qabtay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil sidoo kale loo yaqaan (Ina Caloolgeel), waxaana lagu qabtay howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay qaybta koonfureed ee [...]